Sakafo dimy mandoro tavy ao amin’ny vatana – jEreo Ato
Publié le 28 juin 2019 28 juin 2019 - 3 minutes de lecture Catégories SantéÉtiquettes Mandoro tavy
Matetika isika tsy dia mandanjalanja ny sakafo hanintsika ka mampahangeza ny vatana. Ilaina amin’ny fahasalamana anefa ny vatana amin’ny lanjany antoniny tsara. Izany indrindra no anolorana antsika torohevitra vitsivitsy hanampy antsika hihena.
Manasa anao ary hanohy ny famakiana hatramin’ny farany momba ireo sakafo vitsivitsy mandoro ny tavy izay mety tafapetraka ao anaty vatantsika ao :
Ny baranjely dia voankazo mitroka menaka. Ka ao anaty vatana dia alain’izy io ireo tavy ary tazominy. Tsy vitan’izay anefa fa ariany ivelan’ny vatana, manaraka ny maloto ireo tavy azony ireo.
Ahitàna baranjely betsaka eto Madagasikara
Raha misy manam-paniriana hihena izany dia safidy tsara tokoa ny baranjely. Ankoatr’izay dia manan-karena fibra ara-tsakafo ity voankazo volomparasy ity izay mahomby amin’ny fanalana ny tavy.
Ny dite maitso
Ny thé vert dia manala ny tavy any anaty vatana
Ny dite maitso na “thé vert” hoy ny vahiny dia anisan’ny sakafo mandoro tavy mahomby indrindra. Izy ity tokoa mantsy dia ahitana betsaka “antioxydant” sy singa mpamorona valan-drano (diurétique) ao anaty vatana ao.
Manarak’izay dia ahitana ny EGCG ny dite maitso izay singa manafaingana ny fahapotehin’ny tavy. Ny fisotroana dite maitso izany dia tena mampihena tokoa.
Ny voasary makirana
Ny singa atao hoe “acide citrique” ao anaty voasary makirana dia ahazoana tombontsoa maro ho an’ny vatantsika. Anisan’izany ohatra ny ady amin’ny fahanteran’ny sela. Ao ihany koa ny fampihetsehana na fanentanana ny sela mpiaro hanao ny asany bebe kokoa.
Misy asidra sitrika ny voasary makirana
Raha eo amin’ny lafiny lanja indray dia ahitana soa ihany koa io singa voalaza etsy ambony io. Izy ohatra dia manentana ny taova fandevonan-kanina mba ho mora kokoa ny fandevonana, ny fampiasàna indray ary ny famongorana ny tavy. Ilaina tokoa izany ny voasary makirana ho an’ireo te hihena.
Ny akofana avoanina
Ny akofana avoanina dia manankarena fibra ara-tsakafo mety levona. Io fibra io dia mitazona ny kolesteroly, manamora amin’ny fanalàna azy amin’ny vatana ary manentana ny fandalovany ao amin’ny tsinay1.
Ambonin’izay, ny fampiasàna io akofana avoanina io ao anaty sakafo dia mampahatonga ny olona ho voky elaela. Izany hoe manala ny hanoanana eny antenantenan’ora ka mampihena ny sakafo hanina.
Tsy misy tsy mahafantatra ny paoma isika rehetra
Mitovitovy amin’ireo efa voalaza teo aloha, ny paoma dia ahitana fibra sy “pectine”, azo ampiasaina tsara izany izy raha hampihena vatana. Ny fihinanana fibra moa dia mandrindra ny tahan’ny kolesteroly any anaty rà sy ny tahan’ny siramamy.
Ny “pectine” kosa dia manampy amin’ny fanesorana ny tavy amin’ny fanamoràna ny fandalovany amin’ny tsinay1. Azo ampiarahina amin’ireo sakafo etsy ambony izany ity voankazo ity raha hanao rezima isika.
Araka izay efa nambara teo ambony, mandoro tavy avokoa ireo sakafo nolazaina ireo. Kanefa, raha manam-paniriana hanao rezima mampihem-batana isika dia tokony hampiarahana amin’ny sakafo samihafa sy voalanjalanja tsara izy ireo.
Ohatra amin’izany dia sakafo avy amin’ny zava-maniry, sakafo misy fibra, proteina mahia, sy otrikaina isan-karazany. Misy moa ny fandaharam-potoana fanaovana rezime miampy ny sakafo tokony hanina amin’ny aterineto ho an’ireo liana amin’izany.
1– Izany hoe halakikaky kokoa fa tsy miadana be, mba tsy hahatonga fitohanana.